Garoon caalami ah oo laga dhisayo duleedka Muqdisho | Somsoon
Home WARAR Garoon caalami ah oo laga dhisayo duleedka Muqdisho
Garoon caalami ah oo laga dhisayo duleedka Muqdisho
Mas’uuliyiin ka kala socotay wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka, maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradaha duulista hawada ee maamul goboleedyada Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan ay uga arinsanayeen halka laga dhisayo garoon cusub, kidib markii uu batay ciririga garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Somalia Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in wasaarddu ay diyaarisay Enjineeradii dhisi lahaa garoonka cusub, kadib markii sida uu sheegay wasiir Oomaar ay kordheen diyaaradaha ka dega garoonka Aadan Cadde.
Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in dhismaha garoonka cusub ay soo gaba-gabaynayaa inta lagu guda jiro sanadkaan 2019-ka, waxuuna sheegay in ay magacaabeen guddi ka shaqeeya dhismaha garoonka cusub.
Ilaa hada wasiir Oomaar si rasmi ah uma sheegin halka laga dhisayo goroonka cusub ee diyaradaha oo ay qorsheyneyso wasaaradda gadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaliya in laga dhiso meel ka baxsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Article horeMW dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay musiibadii 14-kii October
Article socoda Maraykanka oo cune-qbateyn kusoo rogay Turkiga